Pep Guardiola Oo Madax-xanuun Ka Qaaday Jadwalka Cidhiidhiga Ah Ee Man City Ay Geli Doonto Marka Ciyaaruhu Bilaabmaan – Heemaal News Network
Pep Guardiola Oo Madax-xanuun Ka Qaaday Jadwalka Cidhiidhiga Ah Ee Man City Ay Geli Doonto Marka Ciyaaruhu Bilaabmaan
Manchester City ayaa dareemaysa culays waqti hore ah iyo jadwal cidhiidhi ah oo ay geli doonto marka ay ciyaaruhu dib u bilaabmaan bisha June.
Tababare Pep Guardiola ayay kooxdiisu ka mid tahay afar naadi oo kulamo dheeraad ah yeelan doona marka loo eego kooxaha kale, waana ciyaartii baaqiga u nqootay markii ay u baxeen finalka Carabao Cup ee ay ko;obka kaga guuleysatay Aston Villa.
Arsenal, Sheffield United iyo Aston Villa ayaa Manchester City kula biiray kooxaha min tobanka kulan uga hadhsan yihiin horyaalka Premier League halka ay 16-ka kooxood ee kale min sagaal kulan u hadhsan yihiin.
City oo muddo laba bilood iyo dheeraad ah kaddib kusoo laabatay tababarka Isniintii shalay, waxa ciyaartoygeeda sugaya kulamo sanka isku haya iyo jadwal cidhiidhi ah oo aanu waqti badan u dhaxaynin, kaas oo ay tahay inay si adag uga hawl-galaan si aanay dhibco badan oo kael u siinin Liverpool oo haddaba 25 dhibcood ka horreysa.
Tababare Pep Guardiola oo ciyaarta ugu horreysa loo badinayo inuu waajaho Arsenal, waxa kale oo dhibaato ku haya dhawr ciyaartoy oo kooxda koowaad ah oo ay ku jiraan Raheem Sterling iyo Kevin de Bruyne oo muujinaya walaac ah inay naftooda u baqayaan oo ay tahay in dib loo dhigo tababarka oo aan lagu degdegin.
Kooxaha horyaalka Premier League ayaa Salaasada maanta si rasmi ah u wada bilaabay tababarka, kaddib markii shir shalay ay yeesheen maamulka Premier League iyo kooxaha uu horyaalku ka kooban yahay ay isku waafaqeen in tababarka la sameeyo, xilli horyaalkana la filayo in bisha June dib loo bilaabo.
Soomaliya Oo Ka Hadashay Go’aanka Maxkamada ICJ